ဖွံ့ထွားလှတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခုန်စရာကောင်းအောင် ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ မမဆောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ဖွံ့ထွားလှတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခုန်စရာကောင်းအောင် ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ မမဆောင်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
By Cele PTPosted on June 1, 2021
ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေနဲ့ VCD အခွေ များ တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ ရာမှ တစ်ဆင့် ပရိသတ် တွေရဲ့ အသိ အမှတ် ပြု လက်ခံ အားပေး မှု တွေ ကို ရရှိ ခဲ့ သူက တော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချော လေး ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ ဟာ အနု ပညာ လော က တွင် ဆယ်စုနှစ် နှစ် စု တိုင်အောင် ကို လူ အများ ရဲ့ ချစ်ခင် မှု တွေ ရရှိ ခဲ့ တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။ မမဆောင်း ရဲ့ တမူ ထူးခြား တဲ့ အပြောလေး တွေ ကြောင့် လည်း ယောကျာ်းလေး ပရိ သတ်တွေ က ကြွေနေ ကြ ရ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ်..။
မမ ဆောင်း ဟာ သူ့ အထာ နဲ့ သူ ဆန်းသစ် တဲ့ ပုံစံ တွေ နဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ ပေါ် တွင် ရေပန်းစား အောင် လုပ် နိုင် သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါတယ်..။ စကား ပြော ပုံ ဆိုပုံ လေးတွေ နဲ့ ဟန် ပန် အမူ အရာ လေး တွေ ကလည်း အများ နဲ့ မတူ ဘဲ ကွဲပြား ခြားနား စွာ တင် ဆက် နိုင် တဲ့ သူမ ရဲ့ အနု ပညာ စွမ်းအား တွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ က မမ ဆောင်း မှ မမ ဆောင်း ဖြစ်နေ ကြရ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။
မကြာ သေး ခင် နာရီပိုင်း လောက် က လည်း မမဆောင်း ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက် နှာ မှာ Live Video လေး တစ် ခု တင်ထား တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဒါက တော့ သူမ ရဲ့ ဝင်း မွတ် ဖြူဖွေး တဲ့ အလှ တရား တွေ ပေါ်သွား မှာ စိုး တဲ့ အတွက် ရင်ပြတ် အကျႌလေး အား အပေါ်သို့ ဆွဲဆွဲ တင် နေတဲ့ မမဆောင်း ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . ။ မမ ဆောင်း က တော့ သူမ ရဲ့ အိမ် တွက် ဓာတ်ပုံ ရိုက် ရန် မိတ်ကပ် ပြင် နေ စဉ် Live လွှင့် ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့်ရှု ခံစား နိုင် အောင် ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင် လေး ကို တစ် ဆင့် ပြန် လည် ကူး ယူ တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါ တယ် နော်…။
ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြနဲ႔ VCD အေခြ မ်ား တြင္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ ရာမွ တစ္ဆင့္ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အသိ အမွတ္ ျပဳ လက္ခံ အားေပး မႈ ေတြ ကို ရရွိ ခဲ့ သူက ေတာ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာ ေလး ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမ ဟာ အႏု ပညာ ေလာ က တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ စု တိုင္ေအာင္ ကို လူ အမ်ား ရဲ့ ခ်စ္ခင္ မႈ ေတြ ရရွိ ခဲ့ တာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။ မမေဆာင္း ရဲ့ တမူ ထူးျခား တဲ့ အေျပာေလး ေတြ ေၾကာင့္ လည္း ေယာက်ာ္းေလး ပရိ သတ္ေတြ က ေႂကြေန ၾက ရ တာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္..။
မမ ေဆာင္း ဟာ သူ႔ အထာ နဲ႔ သူ ဆန္းသစ္ တဲ့ ပုံစံ ေတြ နဲ႔ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ ေပၚ တြင္ ေရပန္းစား ေအာင္ လုပ္ နိုင္ သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ ပါတယ္..။ စကား ေျပာ ပုံ ဆိုပုံ ေလးေတြ နဲ႔ ဟန္ ပန္ အမူ အရာ ေလး ေတြ ကလည္း အမ်ား နဲ႔ မတူ ဘဲ ကြဲျပား ျခားနား စြာ တင္ ဆက္ နိုင္ တဲ့ သူမ ရဲ့ အႏု ပညာ စြမ္းအား ေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ က မမ ေဆာင္း မွ မမ ေဆာင္း ျဖစ္ေန ၾကရ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။
မၾကာ ေသး ခင္ နာရီပိုင္း ေလာက္ က လည္း မမေဆာင္း ရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ ႏွာ မွာ Live Video ေလး တစ္ ခု တင္ထား တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ဒါက ေတာ့ သူမ ရဲ့ ဝင္း မြတ္ ျဖဴေဖြး တဲ့ အလွ တရား ေတြ ေပၚသြား မွာ စိုး တဲ့ အတြက္ ရင္ျပတ္ အက်ႌေလး အား အေပၚသို႔ ဆြဲဆြဲ တင္ ေနတဲ့ မမေဆာင္း ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ ေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ။ မမ ေဆာင္း က ေတာ့ သူမ ရဲ့ အိမ္ တြက္ ဓာတ္ပုံ ရိုက္ ရန္ မိတ္ကပ္ ျပင္ ေန စဥ္ Live လႊင့္ ခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ပရိသတ္ ေတြ လည္း ၾကည့္ရႈ ခံစား နိုင္ ေအာင္ ဒီ ဗီဒီယို ဖိုင္ ေလး ကို တစ္ ဆင့္ ျပန္ လည္ ကူး ယူ တင္ဆက္ ေပး လိုက္ ရပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် လန်းလွန်းနေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အသည်းယားဖွယ် အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
Next post မို့မောက် လျှံထွက်နေတဲ့ ရွှေရင်မွှာအစုံကို ပုရိသတွေ မှင်သက်သွားအောင် ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်